I Jordana dia ony ao Atsinanana Afovoany mirefy 360 km izay mipoitra avy ao amin’ny tendrombohitra Anti-Libanona sady avy avaratra mianatsimo ka mivarina any amin' ny Ranomasina Maty. Mandavan-taona ny fikorianany no tsy miova firy koa ny habetsahan' ny rano entiny (salany: 32 m3/s) noho ny fisian' ny rano madinika mamatsy azy, dia i Iarmoka, izay mipoitra avy anaty vato sokay sy avy amina ranomandry. Ny lohasahany no iva indrindra eran-tany satria mahatakatra any amin’ny 421 m ambanin’ny ranomasina.
Tao amin'ny ony Jordana no nanaovan' i Joany batemy (na batisa) an' i Jesoa, araka ny voasoratra ao amin’ny Evanjely ao amin' ny Baiboly ary mbola misy toerana izay namboarina ao amin’ny fialan' i Jordana ny farihy Tiberiasy (na Tiberiada na Galilea) hanaovana batisa ireo Kristiana mpanao fivahiniana masina.
1 Ny anaran' ny ony
2 Tantara sy jeôgrafia
2.3 Fitrandrahana ny onin' i Jordana sy ireo ady noho ny aminy
Ny anaran' ny onyHanova
Midika hoe "midina" ny anarana hoe Jordana. Amin' ny teny arabo: نهر الأردن / Nahr al-Urdun izay midika hoe "midina" ary amin' ny teny hebreo dia ירד / Yarad na נהר הירדן, Nehar haYarden izay midika hoe "Onin' ny Fahoriana" na "Onin' ny Fitsarana". Amin' ny teny grika: Ιορδάνης / Iordànes.
Tantara sy jeôgrafiaHanova
Ny lalana alehanyHanova
Renirano madinika efatra avy ao amin' ny tendrombohitr' i Hermôna (hebreo: הר חרמון, Har Hermon) no mamorona an' i Jordana. Ny sampan' i Baniasy (arabo: بانياس / Banias) sy i Hasbany (arabo: الحاصباني / Hasbani, hebreo: חצבני‬ / Hatzbani) no lehibe indrindra amin’izy ireo. Miditra ao Israely i Jordana ka mamakivaky ny farihin-konahona avy ao amin’ny Lohasahan' i Hola (hebreo: עמק החולה‬ /Emek Ha-Ḥula) (2 m ny hahavony miohatra amin’ny ranomasina) vokatry ny fisiana tohadrano vato voa-janahary ; avy eo dia miditra amina lalan-tery mankany amin’ny farihin' i Tiberiada (na Tiberiasy) (grika: Τιβεριάς / Tiberias) izay any amin’ny 17 km any ambany. Ny farihin' i Tiberiada dia fantatra amin' ny anarana hoe Ranomasin' i Galilia (na Galilea) na Ranomasin' i Genesareta (hebreo: ים כנרת / Kinneret; grika: λίμνη Γεννησαρέτ / limnē Gennēsaret). Ny farihin' i Tiberiada izay eo amin' ny 208 m ambanin' ny ranomasina dia efa mahazo masirasira kely. Eo anelanelan’ny 42 sy 48 m ny halaliny.
Any ambanin' ny farihy i Jordana dia mahazo rano avy amin' i Iarmoka (hebreo: נהר הירמוך‎ / Nahar HaYarmukh "reniranon' i Yarmukh") izay mitovitovy habetsaka aminy sady manasaraka an' i Siria amin' i Jordania. Mitondra ny rano miangona avy amin' ny ilany andrefan' ny Jebela Droza (arabo: جبل الدروز‎/ jabal ad-durūz, "Tendrombohitry ny Droza") i Iarmoka. Mirefy 320 km i Jordana avy eo amin' ny farihy Tiberiasy hatrany amin' i Ranomasina Maty (יָם הַמֶּלַח‬ / Yam ha-Melah "ranomasin-tsira") noho ny fiolakolahany eo ambony lemak’i Zora (Zor) sy ao amin’i Gora (Ghor), nefa raha atao lala-mahitsy izany dia 109 km fotsiny. Misy harambato roa mizara ny lohasaha ho roa: ny lempon' i Baisana (Baisan) ao avaratra sy ny lempon' i Jerikô (Jericho) ao atsimo. Mahazo rano ao an-kaviany avy amin' ny oeda izay mivarina avy amin' ny kitohatoha-baton' i Transjôrdania sady misintona rano avy amin' ny tangorontendrombohitr' i Ajlona (arabo: عجلون‎ / ‘Ajlūn) izy avy eo mivarina any amin' ny Ranomasina Maty izay 392 m ambanin' ny ranomasina.
Manan-danja eo amin' ny Jiosy sy ny Kristiana ny onin' i Jordana satria voalaza matetika ao amin' ny Baiboly i Jordana.
Toerana manana ny lanjany izy ho an' ireo mpaminany ao amin' ny Testamenta Taloha ao amin' ny Baiboly. Izy no manasaraka ny Tany Nampanantenaina an' ireo Hebreo notarihin' i Mosesy (na Môizy) . Nefa i Mosesy tenany dia tsy niampita akory an' i Jordana satria maty teo amin' ny tendrombohitra Nebo rehefa avy namindra ny fitantanana tamin' i Jôsoa (na Jôsoe) amin’ny fitondrana ny Zanak' i Israely ho ao Kanaana.
Teo anelanelan’ny nahazoan' i Pômpeio an' i Jodia sy ny nandravana ireo Fanjakana jiosy tamin' ny taona 70, dia nisy tahotra sy fanantenana ny amin' ny andro farany (eskatôlôjia) izay nahazo ny Jiosy sasany nihevitra fa antomotra ny fahatongavan' ny Mesia na ny fiafaran' izao tontolo izao. Tamin’ireo antokom-pinoana niforona tamin' izany (ny Sadoseo (na Sadoseanina), ny Zelôta, ny Fariseo (na Farizianina) sns.) dia ny Eseniana no nonina teo akaikin' i Jordana ka mety nisy akony tamin' i Joany izay nitory teny sy nanao batisa teo amoron' ilay ony izany.
Amin' izao fotoana izao dia mankany amin' ny onin' i Jordana ny Kristiana mpivahiny masina avy amin’ny finoana samihafa.
Fitrandrahana ny onin' i Jordana sy ireo ady noho ny aminyHanova
Tsy nisy ny fitrandrahana ny ony Jordana nandritra ny fotoana ela; taty aoriana i Jordana dia niadian' i Israely sy ireo firenena manodinina manara-maso ireo loharano sy renirano madinika mamatsy azy. Nanao paikam-panajariana voalohany i Hays sy i Lowdermik tamin' ny taona 1930; tsy neken' ireo firenena arabo kosa ny paikam-pizaràna Johnston teo anelanelan' ny taona 1950 sy 1955. Nanjary sisin-tany teo amin' i Israely sy i Jordania izy nanomboka tamin' ny taona 1948.
Nanomboka tamin' ny taona 1966 dia nanao rafi-pitarihan-drano manokana avy amin' i Jordana i Israely: ampakarina hatrany amin' ny 256 m ny rano sintominy avy ao amin' ny farihin' i Tiberiasy avy eo entin' ny lakandrano sy fantsona mankany atsimo; izany no manondraka ny lemaka amorontsiraka, indrindraindrindra ny tapany avaratra amin' ny tany efitr' i Negeva (hebreo: נֶגֶב / Negev; arabo: النقب / Naqab) manodidina an' i Berseba (hebreo: בְּאֵר שֶׁבַע / Be'er Sheva; arabo: بئر السبع / Bi'ir as-Sab).
Nanamboatra tohodrano teo amin' i Iarmoka eo ambonimbonin' ny fihaonany amin' i Jordana kosa i Jordania ka afaka nanondraka an' i Gora Atsinana (Ghor) amin' ny alalan' ny lakandranom-pamiliana miala 6 na 7 km eo atsinanan' i Jordana. Taorian' ny adin' ny Enina Andro (1967) dia nahatonga an' i Israely ho afaka nanara-maso ampahany amin' ny lembalemban' i Jordana sy ireo loharanony ny fibodoany an' i Sisjôrdania mbamin' ny lembalemban' i Gôlana (hebreo: רמת הגולן, Ramat HaGolan) (izay lasa niankina taminy tamin' ny taona 1981), sady nahafahany niaro ny fakana rano ao ary nampitomboany ireo tahirim-pamatsian-dranony.
Tamin' ny 1993 nanaovan-tsonia ny fifanarahana teo amin' i Israely sy ny Antokom-Panafahana an' i Palestina dia niantoka ny 1/3 n' ny famatsian-dranon' ny Fanjakana Hebreo (0,7 km3 isan-taona amin' ny rano 2 km3) i Jordana: lasa anton' ady ilay ony, dia ny raharahan' ny rano tao Atsinanana Afovoany izany, dia ady tsy voalamina raha tsy amin’ ny alalan’ ny fandriampahalemana maharitra. Nanomboka tamin’ ny taona 1995 nanaovan’ i Israely sy i Jordania sonia dia lasa sisin-tany mampidi-doza ambena-miaramila sy feno vanja milevina i Jordana. Ireo fitarihan-drano nataon’ i Israely sy i Jordania ireo dia mampihena ny rano tokony hivarina ao amin' ny Ranomasina Maty izay lasa mitombo sira harany hatrany.
Daty sasantsasany manan-tantaraHanova
Tamin’ ny taona 1513 tal. J.K. i Mosesy na Môizy nitondra ny Hebreo ho any amin’ ny Tany Nampanantenaina na ny tany Kanaana. Maty teo akaikin’ i Jordana izy tamin’ ny taona 1473 tal. J.K. sady tsy nanitsaka an’ i Kanaana. I Jôsoa nanorina vato 12 teo afovoan’ i Jordana, teo amin’ izay nitsanganan’ ny mpisorona 12 izay nitondra ny Fiaran' ny Fanekena (Jôs. 4.9). Tamin’ ny taona 29 taor. J.K. i Joany dia nanao batisa an' i Jesoa teo amin’ ny toera-marivon’ i Beta-Abara (hebreo: בית עברה/ bēt ‛ăbārāh). Teo anelanelan’ ny taona 29 sy 33 dia nanatanteraka ny toriteniny tsy lavitra ny moron’ ny farihin’ i Tiberiada (na Tiberiasy) i Jesoa ka teo izy no nandehendeha tambony rano, araka ny voasoratra ao amin' ireo Evanjely.
Tamin’ ny taona 1947, hatramin’ ny nizaràn’ ny Firenena Mikambana an’ i Palestina, ny ony Jordana dia lasa niteraka olana pôlitika. Taorian’ ny ady tanelanelan’ ny taona 1947 sy 1949 dia ny Fanjakana hebreo no afaka nampiasa ireo loharanony. Tamin’ ny taona 1967, ny adin’ ny Enina Andro dia nahatonga an’ i Israely ho afaka naka ny tapany anambany amin’i Jordana izay fampitsaharana ny poa-basy sady nahazoany an’ i Golàna ka nahazoany nanidy ny tapany atsinanana tamin’ ilay ony. Tamin’ ny taona 1961, ny Knesset (hebreo: כנסת), parlemanta israeliana, dia naka ny lembalemba siriana tamin’ ny alalan’ ny fanakambanana an’ i Golàna tamin’ i Israely.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Jordana_(ony)&oldid=1041804"
Dernière modification le 18 Desambra 2021, à 19:48
Voaova farany tamin'ny 18 Desambra 2021 amin'ny 19:48 ity pejy ity.